Rabshado ka socda dalka Itoobiya iyo Madaxda Dalkaas oo ka hadashay – Radio Daljir
Janaayo 5, 2018 11:29 b 0
Dowladda Itoobiya ayaa xirtay dad gaaraya 107-qof oo ay ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay Soohdinta ay wadaagaan Soomaalida iyo Gobolka Oromada Maanta oo jimco ah.
Abiyu Assefa oo ah Madaxa Booliiska Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa isagoo Xog siinayo Baarlaamka itoobaiya sheegay in 98 kamid ah ay gacanta ku dhigeen iyagoo ku howlanaa Rabshada sida uu hadalka u dhigay.
Dhulka Rabshadahu ay saameeyeen ayuu sheegay in uu gaarayo 1500KM, waxa uuna intaa raaciyey in ay Colaadda Barakicisay boqolaal kamid ahaa kumanaanka halkaa kunool, halka ay ku dhinteen tiro aanan Cayimneen.
Soomaalida iyo Oromada waxaa ka dhaxeeya Muran Soo jiitamaye Muddo fog, waxa uuna murankaasi ka jiraa Soohdinta.
Inta rabshada ay socdaan waxaa go’ay xiriir ganacsiyeedkii ka dhaxeeyey Labada Qoomiyadood, waxaana ugu weyn Ganacsiga Khaatka, kadib markii la sheegay in dad ay Oromada u sumeeyeen.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali khayre oo la dar daarmay Ganacsatada Somaliyeed (dhegayso)